Thola amanye amakha kuleli hlobo lango-2021 | Bezzia
Amakha ehlobo lowe-2021
USusana Garcia | 03/06/2021 20:00 | Ubuhle, amakha
Amakha afana nezingubo nezimonyo, aguqula inkathi ngayinye, kunezinhlobonhlobo zamathrendi nokuthandwa. Akudingeki ukuthi ngaso sonke isikhathi sisebenzise iphunga elifanayo ngoba kukhona amakha amaningi nephunga eliguqulelwa kangcono ezimeni ezithile noma ezikhathini ezithile. Kungakho isizini ngayinye kunuka amakha amasha ukuwajabulela, njengalawo esinalo kuleli hlobo lango-2021.
Sizokhuluma ngezinye amakha ehlobo 2021, ihlobo eligcwele ithemba lokubuyisa impilo kaningi. Ngaphandle kokungabaza yihlobo lapho sifuna ukuzizwa sisha futhi senzela isikhathi esilahlekile futhi lokhu sinemibono eminingi yokukunikeza ngamakha azo zonke izinhlobo.
1 Ayini amaphunga ehlobo
2 Ukuqoqwa Kwezithelo Zelamula ngeDolce & Gabbana
3 Okukhazimulayo ngu-Aristocrazy
4 Escale à Portofino nguDior
5 I-Jil Sander Sun Parfum
6 Ingadi Ethandekayo kaMancera Paris
Ayini amaphunga ehlobo
Njalo iphunga lasehlobo libuya ngamakha avumelana nalesi sikhathi sonyaka. Ukushisa nesimo sezulu esihle kusho ukuthi amakha awafani nasebusika. ngiyazi babheka ukwakheka okulula nephunga elivusa ihlobo. Amakha aphefumulelwe ulwandle, ilanga, izithelo zasezindaweni ezishisayo, ezisawolintshi noma izimbali ezifana nembali ewolintshi. Imvamisa le ngamakha avela ehlobo, izinhlobo ezintsha, ezinezimbali ezilula kakhulu nezinuka izithelo, ezilungele usuku nosuku.
Ukuqoqwa Kwezithelo Zelamula ngeDolce & Gabbana
Kulo nyaka inkampani yaseDolce Gabbana isikhombisa iqoqo eliphefumulelwe yizithelo, elinokuthinta okuhle kepha lisuka ebucayi ngesikepisi esimise izithelo. Sikhethe iphunga likalamula kepha kukhona ezinye eziphefumulelwe iwolintshi nophayinaphu, ngokuthanda okuhlukile. Kungumugqa we-eau de toillette ophefumulelwe ngokukhokha intokozo yaseSicily. Leli koloni lisebenzisa ulamula waseSicilian namafutha kaCalabrian bergamot ane-lemon petitgrain. Kumanothi ayo aphakathi nendawo ingumongo we-ginger futhi njengamanothi wokugcina i-vetiver yaseHaiti yesisekelo sokhuni.
Leli phunga liphinde lasungulwa nonyaka futhi lifaka ibhodlela elihle eliqedile limiswe okwentsha. Leli phunga lingelomndeni wama-amber wezimbali. Okwabo amanothi ayinhloko yizimbali ezimhlophe nezithelo ezisawolintshi. Amanothi aphezulu ipheya, i-mandarin, i-bergamot ne-plum, enhliziyweni sithola ukuqhakaza kwe-orange kwesihlahla samawolintshi, okuyi-classic enephunga lasehlobo, i-neroli, i-jasmine ne-magnolia. Kumanothi ayisisekelo kukhona i-musk, i-caramel, i-patchouli, i-amber ne-vetiver. Iphunga elisha nelimnandi kuleli hlobo.
Escale à Portofino nguDior
Yize leli phunga lingelisha, bekufanele sikhulume ngalo, njengoba likhipha ubuhle, lilungele iholide lobukhazikhazi. Ngaphakathi kwe- Iqoqo le-Cruise, uDior wethule leli phunga kusuka kumndeni we-citrus onephunga elimnandi. Ekuqaleni siqaphela i-bergamot, ulamula kanye nokusanhlamvu okuncane, enhliziyweni kukhona izimbali eziwolintshi, amajikijolo e-almond ne-juniper. Kumanothi wokugcina singezwa iphunga lomsedari, umsipresi, imiski kanye negalbanum.
I-Jil Sander Sun Parfum
Leli phunga elisha elethulwe yinkampani iJil Sander lihlose ukuchaza iphunga lelanga, umuzwa ohambisana nathi ehlobo. I- Amakha asikhombisa amanothi kashukela, i-ylang-ylang nobhontshisi we-tonka. La maphunga ahlanganisiwe enzelwe ukudlulisa lowo muzwa wemfudumalo ojwayelekile wasehlobo, umqondo esingeke simelane nawo. Ngaphezu kwalokho, eqoqweni labo sebethule namakha abesilisa.
Ingadi Ethandekayo kaMancera Paris
Leli phunga elimnandi nelama-amber kuhloswe ngalo ukulingisa ingadi enhle. Kumanothi aphezulu sibheka upelepele obomvana, isinamoni kanye nemandarin ebomvu. Enhliziyweni kukhona amanothi ezimbali anembali ewolintshi, i-tuberose ne-rose yaseTurkey. Ngemuva sithola ama-ambergris, i-musk eyimpuphu, i-caramel emnandi nempepho. Kuyiphunga elihle kulabo abajabulela iphunga elingaphezulu kwezimbali kunezithelo ehlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Amakha ehlobo lowe-2021
Imikhuba emi-5 esiza ukuthuthukisa ucansi nomlingani wakho
Ama-ovaloli angu-9 ongangeza ekhabethe lakho lokugqoka kuleli hlobo